Zvizvarwa zveZimbabwe Zvotongerwa Rufu kuIndonesia neSingapore
Chivabvu 18, 2016
Zvimwe zvizvarwa zviviri zviri kutarisirwa kuurayiwa munguva pfupi inotevera kuIndonesia neSingapore mushure mekubatwa nemhosva yekuwanikwa zviine zvinodhaka.
Nyika mbiri idzi dzinozivikanwa nekutongera rufu vose vanenge vabatwa vaine mhosva yekutakura kana kutengesa zvinodhaka.
Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kutarisirwa kuurayiwa nezvimwe zvizvarwa zvekuNigeria zviviri, zvizvarwa zvina zveku China, chimwe chete chekuSenegal, chimwe chekuPakistan uye zvishanu zvemuIndonesia.
Pane mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukushora kutongerwa rufu kwevanhu ava.
Masangano aya anosanganisa reAnti-Death Penalty network, Center for Prisoners’ Rights Japan, Community Action Network, Free Community Church, Function 8, Malaysias Against Penalty and Torture, Maruah uye sangano reInternational Commission of Jurist’s kana kuti ICJ.
Hatina kukwanisa kubata muzinda weZimbabwe kMalaysia kuti tiwan3e mazita ezvizvarwa zveZimbabwe izvi.
Mukuru weICJ muAfrica Vaarnold Tsunga vaudza Studio 7 kuti nyika mbiri idzi dzinozivikanwa nekusanyatsoshandisa chikero chemutemo zvakanaka zvinopa kuti vamwe vanenge vasina mhosva vagume vourayiwa. Vati vanhu ava havafanire kuurayiwa.